Zvaunofarira - Emergency Live
Martina Tesser	 Jun 19, 2019
Ramangwana reAmbulensi: A Smart Emergency Care System
Kuvandudza Zvokudya Zvokudya uye Nyaya Yokugadziriswa Nzvimbo yeAccra ...
TOP 5 EMS Mabasa emabasa munyika yose - Jordan, Europe uye South ...
midziyo Utano Nekuchengeteka mipendero pamisika nhau Stories
Kurapa Chirwere Chepfungwa Pamusoro peAmbulensi - Maitiro Aungaita Nechiremera Uye Chirwere Chisimba ...
Emergency medical services inofanira kutarisana nemamiriro ezvinhu akasiyana-siyana, savarwere vepfungwa vanogona kuva vechisimba uye zvakaoma kutarisira. The #AMBULANCE! mharaunda yakatanga mu 2016 kuongorora zvimwe zviitiko. Iyi i #Nhasi yegore nhau yeku ...
Ambulensi Yakarohwa neTereji muPoland - Chiremba uye Paramedic vakafa
Iko kuguma kunoshamisa kwechikwata chema ambulensi muguta rePuszczykowo, Poland. Imwe nyanzvi yakaparadza motokari yakavharwa mumugwagwa wechitima. Mukuru wezvirwere uye chiremba pabhodhi akafa pakarepo. Munhu wechitatu anotyaira motokari ...
Mhirizhonga Yemazuva Ose Zuva reNyika: Dambudziko reNyika yeMigodhi muYemen. Kuedza kweUN uye ...
Vakawanda venyu vangave vasingazivi kuti nyika ndeipi, asi ivo zvechokwadi ndeimwe yematambudziko makuru enyika yedu yemazuva ano. Sangano reUnited Nations uye Red Cross iri kuita mabasa ekudzivirira njodzi uye kubata vanhu vanovhiringidzwa.
Mafashamo anochengetedzwa nehuwandu hunowanikwa muVejle - Misha Dzakawanda dziri muShoko!
Denmark ndiyo imwe yenyika dzokutanga kutamira kune nzira yakasimba yekuwedzera kusimba. Zvechokwadi, Vejle iri kuenderera mberi nekuchengetedzwa kwemafashamo kweguta nekuda kwekuchinja kwemamiriro ekunze nekugadzirisa mafashamo.
Cholera muMozambique - Red Cross uye Red Crescent kumhanya kunzvenga njodzi
Mozambique iri kutarisana nedambudziko rakaoma uye rakaoma. Cholera iri kupararira munyika yose mushure mokunge Cyclon Idai uye vakaurayiwa vari vazhinji, kunyanya vana. Red Cross uye Red Crescent vari kushanda panzvimbo yekurwisa epidemy.
TOP 5 EMS Job Opportunities Pasi Pose - Zvitsva Zvitsva se Paramedic ne EMTs mu Ireland, ...
I5 inonyanya kufadza nzvimbo yebasa revhiki rino paEmergency Live. Kusarudza kwedu kwevhiki nevhiki kunogona kukubatsira kuti uwane hupenyu hwaunoda sechiremba.
Kasubi Tombs moto outbreak - Apo boka revanhu rinopinda kurwisana neEEMs maqembu
Martina Tesser	 29 Sea, 2019
Emergency medical services dzinotarisana nemamiriro ezvinhu akasiyana-siyana, sevanhu vakatsamwa, avo vanogona kukonzera mamiriro akaoma. The #AMBULANCE! mharaunda yakatanga mu 2016 kuongorora zvimwe zviitiko. Iyi i #Nhau yeFriday story kuti vadzidze zviri nani sei ...
Falck uye UN Global Compact pamwe chete kusimbisa kusimba Kuedza
Martina Tesser	 28 Sea, 2019
Falck akabatana neUnited Global Compact initiative uye akaita saizvozvo kuzvipira kwayo kubatanidzwa mukusimudzira hutano hwemagariro evanhu, nezvemamiriro okunze uye ehupfumi.
Multifunctional Roofscape Center muRotterdam - Misha Dzakawanda dziri muShoko!
Martina Tesser	 27 Sea, 2019
Nhamba yeNetherland ndeimwe yenyika dzokutanga kuwedzera simba rekushandisa rinoshandiswa. MuRotterdam, iri kukura pfungwa yezvizhinji zvepamusoro pedenga rekuita kuti zvive nekusimudzira uye kubudirira.
Emergency Responders VS Crime Scene - 6 Most Common Mistakes
Micheal G. Sayson	 26 Sea, 2019
Hazvisi zvisinganzwisisiki kuti vaparidzi vanokurumidza kutarisana nechiitiko chemhosva. Mabasa ekupindira anofanira kuitwa, asi haisi nyore uye kutarisirwa kunokosha. Saka manje? Pano 6 zvikanganiso zvinoparidzirwa nevanopindura zvinogona kuita pane zvichemo zvemhosva.